Ireo no fampiasana glycerine legioma | Nutri Diet
PaÃ¼ Heidemeyer | | soso-kevitra
Glycerine legioma dia fantatra koa amin'ny hoe glycerol ary izy io dia ranoka mangarahara izay tsy misy fofona vita amin'ny menaky ny zavamaniry, indrindra ny voanio palmie, soja na menaka voanio.
Raha te hahafantatra ny atao hoe glycerine legioma ianao, inona no ilana azy, inona no azony atao ho anao, inona ny fananana ananany ary aiza no ahafahanao mahazo azy, aza misalasala manohy mamaky ireto andalana ireto.
Ny glycerine dia fantatra koa amin'ny hoe glycerol ary azo avy amin'ny menaky ny zavamaniry amin'ny alàlan'ny dingana antsoina hoe hydrolysis.
1 Inona no atao hoe glycerine legioma?
2 Toetran'ny glycerine legioma
3 Mampiasa glycerine
4 Aiza no hividianana glycerine
5 Fampiasana fitandremana
Inona no atao hoe glycerine legioma?
Ny glycerine legioma dia ranon-javatra mangarahara sy tsy misy loko ary tsy manampy fofona koa, manana tsiro mamy ary mety levona anaty rano sy toaka.
Manana fampiasa maro izy ary mandrakotra saha maro amin'ny indostria fanatsarana tarehy, sakafo ary fanafody. Ho fanampin'izany, ampiasaina ho solon'ny alikaola amin'ny loko botanika sy ahitra izy io.
Toetran'ny glycerine legioma
Izy io dia vita amin'ny fizotran'ny hydrolisis. Ity dingana ity dia misy ny tsindry azo amin'ny menaka amin'ny mari-pana sasany miaraka amin'ny rano maromaro.
Izany tsindry izany dia mahatonga ny glycerine hisaraka amin'ny asidra matavy ary hoentin'ny rano. Inona no valiny namboarina hahazoana fahadiovana lehibe kokoa. Ny glycerine legioma madio dia manana endrika mitovy amin'ny syrup satria ao anatin'ny fangaro misy azy ireo dia misy vondrona hydroxyl telo.
Ny fampiasana glycerine dia mety ho maro, fantaro izy ireo ary gaga amin'izay azony atao ho anao.
Mitazona ny hoditry ny hoditra sy mando. Manampy ny hoditra hanangona rano bebe kokoa avy amin'ny rivotra ary ho maina.
Manasitrana ny hoditra maina, marokoroko ary sosotra.
Manalefaka ny hoditra. Sakano ny hoditsika tsy ho antitra, apetaho glycerine mba hamafana ny hoditra ary amin'izay dia sorohana ny olana mifandraika amin'ny taona. Mena, mahasosotra, na maina.
Mampihena ny fahaverezan'ny rano amin'ny hoditra.
Manatsara ny kalitaon'ny hoditra ary mahatonga antsika tsy hahazo mony.
Miaro ny hoditra amin'ny fomba mahasalama, Izy io dia afaka miasa ho toy ny mpiaro voajanahary ny tarehy na ireo faritra ampiharinao.
Mamelombelona ny hoditra.
Manadio ny mason-koditra, manala ny loto sy ny vovoka apetraka amin'ny hoditra.
Manatsara ny fisehoan'ny hoditrao izany. Hahatonga azy io ho malefaka kokoa, malefaka kokoa ary matevina kokoa.
Ny glycerine koa dia ampiasaina hanampiana mamy sakafo ambany gliosida.
Glycerine tsy miteraka lavaka.
Hita amin'ny vokatra ao an-trano toy ny shampoo na savony.
Izy io dia ampiasaina ho toy ny fanafody lohahevitra Burns.
Ao amin'ny supositories miseho koa ny glycerine.
Io akora io tsy misy alergen izy io ary voamarina ny momba azy io.
Aiza no hividianana glycerine
Glycerine azo vidiana ao amin'ny fivarotam-panafody na amin'ny magazay manokana ny vokatra voajanahary. Mora ny mahita azy na dia marina aza izany ny fanjifany tsy dia mandroso loatraAmbonin'ny zava-drehetra, ny indostria no mampiasa azy hampahafantatra azy ho toy ny famenony.
Ity menaka legioma ity dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny toe-javatra sasany. Izany hoe, tsy maintsy jerentsika ny toetrandro manodidina antsika, nanomboka Amin'ny toetr'andro tena maina dia tsy tokony hampiasaina izy io satria mety hanimba ny hoditra izany.
Mila mifandray amin'ny toetr'andro mando ny glycerine, satria avy any izy io dia hahazo rano hanatsarana ny kalitaon'ny volo, hoditra ary faritra hafa amin'ny vatana.
Efa mahalala bebe kokoa momba ny glycerine legioma ianao, vokatra tsy dia fantatra loatra fa ampiasaintsika isan'andro nefa tsy tsapantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Glycerine anana
Tsara sa ratsy ny mihinana tongolo gasy manta?